Dhaqaalaha Masar Oo Dhulka Galay Tan iyo Markii uu Dhacay inqilaabkii Melleteri.
Tuesday July 03, 2018 - 21:41:29 in Wararka by Super Admin
Wadanka Masar hoos udhac dhaqaale oo aad uballaaran ayaa lagasoo sheegaya wadankaasi shan sanadood kadib markii uu inqilaab melleteri talada wadanka ku wareegay Cabdi Fataax alsiisi hoggaamiyaha xukuumadda dabadhilifka Qaahira.
Dhaqaalaha dalka Masar ayaa ah mid gibi dhacleynayay tan iyo wixii ka dambeeyay sanaddii 2013 kolkaas oo melleterigu ay tala qabsadeen, ayna gacanta ku dhigeen kaabayaasha dhaqaalaha wadanka, sicirka lagu sarifo lacagta maxalliga ah ee Juneyh-da loo yaqaan ayaa ah mid sabbeynaya wuxuuna ku hor kufay dollarka Mareykanka.
5 Sano kahor 1kii dollar waxaa lagu sarifayey gudaha dalka Masar lacag u dhiganta 6.69 Juneyhat, balse manta waxaa lagu kala sarifanayaa qiima lacageed oo gaaraya 18 Juneyhaat.
Liitarka Baziinka ayaa isna lagu iibsanayey 5 sano kahor 1.85 Juneyhaat, balse manta waxaa lagu kala iibsanayaa 6.75 Juneyhaat.
Kaararka lagu raaco tareenada isaga kala goosha magaalooyinka dalka Masar ayaa lagu iibsan jiray 5sano kahor 1 Juneyh oo kaliya balse iminka waxa uu marayaa 7 juneyhaat, tas oo ka dhigan in lacagta iminka lagu iibsado ay ku 7 jibaaranto tii 5sano kahor lagu iibsan jiray.
1kii Gasac ee gaaska lashito ayay dadka Masarida ah ku iibsan jireen 5sano kahor qima lacaged oo gaaraya 8 Juneyhat, balse manta gudaha Masar waxaa lagu iibsanayaa 50 Juneyhat.
Deynta gudaha ee lagu leeyahay dowlada Masar ayaa 5sano kahor aheyd 1.4T oo juneyhaat hadana waxa ay sii caga cageynaysaa 3.6 T juneyhaat.
Deynta dibada ee lagu leeyahay dowlada ayaa aheyd 5sano kahor $34.5M, maantana waxa ay mareysaa $82.9M oo dollar.
Dhamaan sare u kaca ku yimid qiimaha lakala siisto adeegyada Asasiga ah ee dalka Masar iyo hoos udhaca dhaqaale ee kajiro wadankaasi ayaa la sheegaya inay sabab u yihiin Madaxda Militaryga ee talada wadanka xooga ku qabsaday, kuwaas oo Musuq maasuq ku sameysanaya dhaqaalihii lagu bixin lahaa wadanka Masar.
Inkastoo dowlada Masar tiro dhowr jeer ah ay sheegtay inay heshiisyo ay ku kacayaan lacago balaayiin dollar ah la saxiixatay wadanka Sucuudiga iyo Maamulka Yuhuuda kuwaas oo lagusoo saarayo gaaska la shito, hadane ma muuqato wax lataaban karo oo kasoo baxay heshiisyadasi.
Dhaqaale xumada kajirto wadanka Masar waxaa sii dheer Amni daro iyo Bandow qaatay muda sanado ah oo saran Magaalooyinka katirsan gobolka Seyna ee dhaca woqooyi bari wadanka Masar.
War kasoo baxay xukuumada AlSISI ayaa lagu sheegay in la kordhiyey Bandowgi saarna magaalooyinka Rafax iyo Al-Cariish ee katirsan gobolka seyna, laguna daray muda 3 bil oo dheeri ah.
Waa markii 16aad oo xukuumada Masar ay kordhiso bandawga saaran gobolka seyna tan iyo sanadkii 2014ka, mar kastana waxa ay ku kodhineysay Muda 3 bil ah taas oo markey dhamaataba lagu kordhinayey 3 bil oo kale, waxa ayna marmarsiiyo kaga dhiganeyso waxa ay ugu yeereen howl galka la dagaalanka argagixisada ee ciidanka Masar ay kawadaan gobolka Seyna iyo deeganada ku xeeran.